Wafdi Ka Socda Jubbaland Oo Ku Wajahan Xeryaha Dhadhaab – Goobjoog News
Wafdi Ka Socda Jubbaland Oo Ku Wajahan Xeryaha Dhadhaab
Wafdi ka socda maamulka Jubbaland ayaa la filayaa in dhowaan ay tagaan xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya, iyaga oo dadka Soomaaliyeed kala soo hadli doona arrimo ku aadan kusoo laabashada dalkooda.
Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland Maxamed Faarax Warsame Darwiish oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qorshaha uu yahay in isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay tagaan Dhadhaab, lana soo kulmaan shacabka Soomaaliyeed.
“Rajo weyn oo dadkaasi wax loogu qabanayo baan qabnaa, dadkaasi badi annaga ayeey inoo soo socdaan, aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo ayaa tagi doona Dhadhaab, waxaa dadkaan loo sameyn doonaa guryo, Isbitaal iyo Iskuullo, wax ay ku noolaadaan muddo Lix bil ahna Kaash baa loo siinayaa” ayuu yiri wasiirka.
Hadalka wasiirka ayaa yimid kadib markii kulan ka dhacay magaalada Kismaayo, islamarkaana ay wada qaateen UNHCR, dowladda Kenya xubno ka socda iyo dowladda Soomaaliya la isku af gartay in qaxootiga ka imaanaya Dhadhaab la geeyo deegaannada Jubbaland.
Xeryaha Qaxootiga Kenya waxaa si iskood ah isaga soo qoraya shacab Soomaaliyeed oo doonaya in dalkooda ay dib ugu soo laabtaan si ay uga qeybqaataan horumarada dalkooda ka socda.
Professor Gaandi Oo Looga Guuleystay Doorashada Aqalka Sare Ee Jubbaland
Madaxweynaha Galmudug “Madaxweyne Gaas Waxaa Ka Wada Hadalnay Colaadda Gaalkacyo”